Demokrasii fi yaa’a murtii dabarsaa – Gubirmans Publishing
Egaa demokraasiin sirna qooda fudhattooti hundi walqixxee tahuutt beekaman waan taheef sagaleen hundaa ni dhagahama ulfinnis ni kennamaaf. Namooti kan walgahan qabattee dhimma waloo ilaaluu irratt mari’achuufi. Kanaaf tokko tokkoon qooda fudhataa yaada dhihaateef gumaacha tolaa gochuutu irraa gaafatama. Sammuu dhiphachuun tokko tokko fedha ofitoomaa gandaa bubbbucuu malee, mullisa isa ballaa dhimma murna guddaa ilaaluu hanqatu. Sanaaf jedhanii usustootaa fi murnoota bubbucuu, akka murni guddaan sirriit hin hojjenneef qoomtuu tahan uumu. Shaakalooti duubatt harkisoon akkasii utuu faca’anii dirree bobbaa hin faalin akka ol bahaniin addaan baafamanii, kophxeesamuu qabu.Xumuruuf demokraasiin akaaku isa Grikii haa tahu kan Gadaa sirna qooda fudhannaa kan dubbiin laaltu hundaa jajjabeessuu qofa utuu hin tahin, sirna gumaacha tokko tokkoon qooda fudhataaf walqixxee nafii guddaa kennu. Murni tokko fakmishoo murtii dabarsaa lamaan dhahaman keessaa kan itt tolett dhimma bahuu dandaha. Waanuma halleefuu fedhii hundaa, kan gar tokkoo caalaa guddaa fi halle haammataa akka tahe beekamuu qaba. Miseensi mijuu tokko yaa’a murtii harka jiru hankaasuuf shira hin xaxu jedhamee fudhatama. Komeen yoo jiraate akka seera dhaabaatt dhihaataatt beekama. Akeeki demokraasii akkuma qooda fudhattootaa carraa murtii dabarsuu walqixxee kennu, murtii yeroon itt fudhatamee darbettis buluu ni gaafata. Gumaan murnaa mijuu beekaa alatt dhiifamuun irra hin jiru; akkasumas gumaan tokko hagam adda jedhee of yaadus akkaataa beekamaa alatt mararfamuu eeggachuun munaaquu dha.